DBT Network : Nampahafantatra ireo fanamafisam-peo raitra | NewsMada
DBT Network : Nampahafantatra ireo fanamafisam-peo raitra
Inona ny fanamafisam-peo raitra sy hiaka farany, mamaly kokoa ny hetahetan’ny mpanjifa? Samy manana ny havaliny izay ireo teknisianina momba ny feo. Tafavory indrindra ireto farany, omaly, tetsy amin’ny Skate Park Antanimena. Nampahafantarina ary nandramana nandritra izany mantsy ireo fanamafisam-peo RCF, vita avy any Italia, izay iandraiketan’ny DBT Network ny fitsinjaran azy aty Madagasikara.
“Mazava tsara ny feony, tsy ilay midoboka mandona fo kanefa ampy tsara ny fanenony. Ho hita eo ny tena fivoakany rehefa anaty fampisehoana”, hoy ny nambaran’i Mamy Gotso, anisan’ireo nanatrika ny fampahafantarana. “Manatombo izy amin’ny fahadiovan’ny feo. Eo ihany koa ny hakelin’ny entana raha oharina amin’ny tanjaka omeny. Tsy manahirana ny fananganana sy ny fandravana azy. Tsara ny kalitaony, saingy ny mpanjifa eto amintsika ve ho mora taizana amin’izany?” hoy kosa ny fanamarihana nataon’ny matihanina iray amin’ny fikirakirana ny feo.
“Nokendrena ho ireo mety mahaliana indrindra ireo teknisianina mpikirakira feo sy ireo mpandraharaha eo amin’ny sehatry ny fikarakarana hetsika ireto entana nampahafantarina ireto. Efa maro amin’ireo no nisy namandrika mialoha, ary mbola misy karazany hafa maro any. Manamora ny fakana ny entana any am-potony ka hatraty Madagasikara izahay”, hoy ny fanazavana nentin’Andrianjohary Jao, avy amin’ny DBT Network.